Jubbaland oo ka hadashay Miinada laga soo saaray meel u dhaw hoyga Cabdirashiid Xidig ee Kismaayo – Somali Top News
Jubbaland oo ka hadashay Miinada laga soo saaray meel u dhaw hoyga Cabdirashiid Xidig ee Kismaayo
Taliska Qeybta Booliska Gobolka Jubbada Hoose Korneel Maxamed Naasir Guuleed ayaa sheegay in Ciidamada Jubbaland ay soo qabteen Miino lagu aasay Xaafada Farjano taas oo la doonayay in Shacabka lagu dhibaateeyo.
Waxa uu sheegay in Xildhibaan Cabdi Rashiid Maxamed Xidig oo ah Musharax Madaxweynaha Jubbaland uu u gefay laamaha Amniga,isla markaana aan waxba ka jirin hadalkii uu horay u sheegay ee ahaa in qaraxaasi lagu aasay meel u dhow Hooygiisa uu ahaa mid la soo abaabulay,sidoo kalena uu ka mid dhigayo ol olihiisa Siyaasadeed.
Maalma ka hor Ciidamo ilaalo u ah Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig kana mid ah musharixiinta Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa ay soo saareen miino lagu aasay meel u dhow hoyga uu ka degan yahay Magalada Kismaayo,waxaana qaraxaas miino uu ku sheegay mid siyaasadeysay.
Qoraal uu soo dhigay Bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in qaraxaas uu ahaa mid abaabulan oo ay ka dambeeyaan dad xildoon ah kana tirsan Maamulka Jubbaland iyo laamaha amniga,hayeeshee waxaa warkaasi beenisay Wasaaradda Amniga Dowlad goboleedka Jubbaland.
Si kastaba musharixiinta Madaxweynaha Jubbaland ee qaarkood xilligaan ku sugan Magalada Kismaayo aaya cabasho badan waxaa ay ka muujinayaan Madaxda ugu sareysa Jubbaland,iyada oo ay xusid mudan tahay in todobadyo ka hor Garoonka Kismaayo ay ku dagaalameen Ciidamo uu wato Musharax Cabdi Naasir Seeraar iyo Ciidamada Jubbaland ee ilaalada ka ah Garoonka Kismaayo.
← Farmaajo” Soomaali laguma dhaco ee annaga nagu kalsoonaada”
Wasiir Sabriye oo faah-faahiyay habraaca uu soo saaray ee maamul goboleedyada iska diideen →
Somaliland oo ganacsateeda ka dooratay shirkadda DP World ee Berbera maamusha
Gudoomiyaha Aqalka Sare iyo wakiilka Qaramada Midoobay oo kulan yeeshay
January 5, 2020 Somali Top News 0